Author: Gaktilar Tezil
Mid jawaab ah ayuu soo laliyey. Waxay socotay mudo dheer waxaana aakhirkii bud-dhige u noqday Maxamed Cumar Dage oo habeenkii ay bil kowsatay waa wiil la yidhi.
soomaalidaa Noocyada gabayadu af Soomaligu waa uu farabadanyahay waxana ka mid ah geeraarka, guurawga, maansada, saarka, shiribka, buraanburka, guulowga iyo arimo kale. Recitation of Holly Quran by Sh.
Inay ka filo ka fado tahay oo ay gabyaaga xigi doona kii hadda dhameeyey iyo gabaygiisu sidduu noqon doonaba dadweynuhu, tuhun waa halkiisee, u tooghayaan ayaa qiimaheeda samada ku laala. Bal ha iska yimaado oo wax uun soomaaida diro ayuu yidhi Camanje.
Levereras inom vardagar. Mudo sano ah ayaa ka soo wareegtay markii gabay loo adeegsaday meeriksa ‘hooyaalayeey’ iyada oo uu Raage Ugaas Warfaa lahaa gabaygaas. Dhoodaan Sayid Maxamed M. Fanka iyo Suugaanta Soomaalida.
Dadkaas waxaa ka mid ah Daahir Soimaalida Buraale, oo isagu xafidsan in ka badan boqol gabayada Soomaalida ah oo uu bilaabay isagoo da’yar. Nasiib xumo tixdaa uu balan qaaday wakhtigu kuma simin inuu na soo gaadhsiiyo oo isaga oo aan wali tirin ayey tii Alla u timid. Dareenkaa iyo Sababahaa oo badan waxaa ka mid ah qoonsi uu abwaanku qoonsado gabay mid kale tiriyey. Waxaa ku libaystay oo xujooyinkoodii la furi waayey Faarax Caytame iyo raggii la qeyrada ahaa. Eeg sida hufan ee uu u gawriyey.
Labadaa nin oo midkood walba af-hayeen u ahaa qoyskiisa waxay is dhaafsan jireen gabayo badan.
Waxaa billaabay Cali Dhuux Aadan Soomaaldia isaga ayaana soo af-jaray. Dhammaan waxay ku salaysan yihiin barnaamijyo Dhaqanka iyo Hiddaha Soomaalida aan kaga faalloon jirey, kana baxay idaacadaha Afsoomaaliga ku hadla qaarkood sida Raadyo Muqdisho, Raadyo Hargeysa, Laanta Afsoomaaliga ee BBCda iyo, ugu dambaysta, Laanta Afsoomaaliga ee Codka Maraykanka, magaceedana Voa fabayada soo gaabiyo.
Wareysi Ra’iisal Wasaare Cumar Cabdirashiid. Guud ahaan iyo gaar ahaanba, gabayga. Qoraalka gudaha oo kooban. Guba markaan leenahay waxaan ujeednaa Gubadii dhabta ahayd ee Ogaadeen dhexdii ka fuftay ee 13ka gabayaa oo wada qoyskaa ahi ka qaybqaateen.
Cabdullaahi Dhoodaan waa kii lahaa isagoo caddaynaya guud ahaan in gabay iyo geeraar ama gar iyo gorfayn kolba kay joogtaba qofka iyo aragtidiisa la isku astayn karo, si aan dhib badnayna loo odhan karo Allay lehe qawlkaasi qawlkii hebel waayahay: In kasta oo aanan gabayada kale badankooda arag, haddana waxaad ka fahmaysaa midka Dhoodaan in abwaanada kale isku aragti dhawaayeen, Dhoodaanna aragti tooda ka duwan ku doodayey.
Waxaa ka mid ahaa beydadkii ay isdhaafsadeen: Wuxuu jeclaa Qamaan inaan Cali Dhuux iyo gxbayada la dhex marin. Waxaa ku noqday Banfis oo yidhi isagoo qoyskiisa la hadlaya: Diiwaanka Abwaanada Soomaaliyeed ee aadka loo yaqaan, walow diiwaano qoraal jiraan taxa ilaa 70 hobal oo caanah, waxaa safka hore kaga jira raga ay ka midka yihiin Garaad Faarax Garaad oo loo yaqaan Wiilwaal iyo dadkii isku waqtiga ay ahaayeen sida abwaanka caanka ah ee:.
Abshir Nuur Faarax Bacadle isagoo ninkaa u digaya ama tusaalaynaya waa kii lahaa: Waxay ka billaabatay Xamar, waxaana billaabay Maxamed Gaariye.
Odhaahda afka iyo xikmadu waxay ahaayeen nidaam bulshadu iskugu gudbiso fariimaha, dhacdooyinka, sheekada iyo wixii la mid ah. Deelqaafka gabqyada gebidhacu saw gabayga cadowgii ma ahaan jirin.
Inta badan waxay u billowdaan si kadiso ah oo aan qorshe hore lahayn. Xarbi ayaa is weydiiyey sababta adiga iyo tumaal beentu, waa mid aad taqaanaane Qawdhan gabayga ugu daray. Qoralka waa la heli karaa sida uu qabo Ruqasadda Commons ee hindisidda ee marka loo eego la midka ; waxaa soo hoos gali kara qodobo kale.
Wuxuu ka soomaalida qadaf, beyd dalab leh, iyo wax kasta oo anshaxa iyo dhadhanka gabayga dili.
Mid kale ayaa lagu dhaliilaa beyd jaban, deelqaaf, hadal aan haboonayn, dood guracan, qodobka laga hadlayo oo uu dhinac ordo, garawsho xumo, indha-cadays iwm. Bal doodaa liidatana eega ayuu leeyahay. Bal u fiirso, Yamyam oo ahaa ninkii afraad ee heesa ayaa xataa ku wareersan ujeedadii Deelleey ee sida raadka gaadhiga dhinac walba u jeeday.
Haddii isaga oo gabay ka jawaabaya abwaanku mid tiriyo, waxaa billowda silsilad ama labadaa abwaan ku koobnaata ama kuwa kale ay soo galaan. Masraxiyaddii Aqoon Iyo Afgarad: Magacu wuxuu ka raacay beydkii Saahid ee ahaa: Qarniyo badan muddo laga joogo ilaa iyo haatan, waxay suugaanta Soomaaliyeed door lixaad leh ka qaadatay kobaca dhaqanka iyo waxa mideeya bulshada. Haddaba halkaa ayuu jawaab kasoo dalwiyey. Xusid iyo magac silsiladeed ha joogtee, uma dhawa mid qudha kuwan kale ee aan kusoo qaatay qoraalkan.
Dubaaqiinu sidee arintaa u yeelay. Gabayada silsiladda ah ee rag badani gabbayada isku daray way ku badan yihiin suugaanta Soomaaliyeed, waxayna gabayada noocaa ahi horseedaan in abwaanadu isdhaafsadaan xikmad dhumuc weyn oo aysan soo daayeen haddii aanay silsiladdaasi jirin. Rag kale ayaa jiray. Silsiladdan waxaa furay nin lagu magacaabo Cali Banfis oo reer Hargaysa ah laakiin xilligaa Xamar joogay.
Waxay ahayd silsilad dawladii Maxamed Siyaad mucaarad ku ahayd. Nimankii tu xunbaa ka raacday waxayna ku baaneen inay qeylo-dhaan degaankoodii ku dhex tuuri doonaan, gabay jawaab ahna soo diri doonaan.